Kana iwe uine yakakura saizi yekunyorera base uye wafanirwa kutamira kune nyowani email sevhisi webasa (ESP), iwe unogona kunge wakambove kuburikidza nemarwadzo ekuwedzeredza rako nyowani mukurumbira. Kana zvakatonyanya ... iwe hauna kuzvigadzirira uye pakarepo ukazviwana uri mudambudziko nerimwe rematambudziko mashoma:
Kutanga nerutsoka rwerudyi ne IP Kudziya zano rakakosha kana uchinge watamira kune mutsva email service provider. Mazhinji maEmail Evhisi Vanopa havaiti rakakura chibvumirano nezvazvo ... vanongokuyeuchidza kuti udziye yako nyowani IP kero. Pamhedzisiro yepamusoro, zvakadaro, harisi basa rakareruka:
Domain Intelligence - Mazano mazhinji ePI Anodziya anongokuudza kuti utarise email yako neIP; zvisinei, izvo hazvisi nyore sekutarisa domain yeiyo email kero. Isu tinogadzirisa dunhu uye nekuve nehungwaru pane chavanoshandisa sevhisi yekuvandudza mishandirapamwe. Izvi zvakakosha nemakambani eB2B ayo ari kunyanya kutumira kunzvimbo dzemabhizinesi uye kwete zvakajairika maemail evatengi.
Tiri kushanda kusimudzira chikuva kunyangwe zvichienda mberi neinobatanidza dhata uye kunyange zvakarongwa kutumira kuburikidza neAPI kuitira kuti makambani atomboita zvishoma. Panguva ino, inonyanya kushanda yekumashure - asi isu tiri kushanda zvakatsiga kumberi-kumagumo uye izvi zvinowedzera.